နယ်သာလန်(Netherlands) Nederland (Dutch)
"Je maintiendrai" (ပြင်သစ်)
"William of Nassau"တမ်းပလိတ်:Brk
—2.0% အခြား ခရစ်ယာန်ဘာသာ
Unitary ပါလီမန်စနစ် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက် ၁၆၄၈ ခုနှစ်
၁၇,၄၁၈,၈၀၈  (အဆင့် - ၆၈)
၅၂၁ (အဆင့် - ၁၆)
$၁.၀၀၄ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၂၈)
$၅၈,၂၅၅ (အဆင့် - ၁၃)
$၉၁၄ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၇)
$၅၃,၀၁၆ (အဆင့် - ၁၃)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ($, USD)[မှတ်စု ၄]
UTC−4 (AST)[မှတ်စု ၅]
+31, +599[မှတ်စု ၆]
.nl, .bq[မှတ်စု ၇]
သမိုင်းတွင် ဒတ်ချ်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ဘက်မလိုက်မူဝါဒဟု ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှစ၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း အများအပြားတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၍ လာခဲ့ပြီး အရေးပါထင်ရှားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကုလသမဂ္ဂ၊ နေတိုးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်စီးပွားရေးသည် အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကို ကြီးစွာ မှီတည်နေသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဘက်မလိုက်မူကို စွန့်ခဲ့ပြီး ဘရပ်ဆဲစာချုပ်(Treaty of Brussels)တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် နေတိုးအဖွဲ့၏ တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒတ်ချ်တပ်မတော်သည် နေတိုးအဖွဲ့၏ အင်အားတရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်အေးကာလအတွင်း ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် များစွာသော အခြေစိုက်စခန်းများတွင် တပ်ဖြန့်ထားရှိခဲ့သည်။ ကိုရီးယား စစ်ပွဲအတွင်း ဒတ်ချ်စစ်သား ၃,၀၀၀ ထောင်ကျော်သည် အမေရိကန်တပ်မတော်၏ အမှတ် ၂ ခြေလျင်တပ်မ (2nd Infantry Division) တွင် တာဝန်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဒတ်ချ်တပ်မ​တော်သည် ပ​ရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်မ​တော်တစ်ရပ်အဖြစ်သို့ ကူး​​ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များမှကတည်းက ဒတ်ချ်တပ်မ​တော်သည် ​ဘောစနီးယားစစ်ပွဲနှင့် ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲများ၊ ဆက်ဒမ်ဟူစိန် စစ်ရှုံးပြီး​နောက် အီရတ်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် တပ်စွဲထိန်းချုပ်ထားခြင်း၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
ရေငုပ်သင်္ဘောတပ်ဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော တာဝန်များကို အမျိုးသမီးများအတွက် ခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်တပ်မတော်၏ အထူးတပ်ဖွဲ့(Korps Commandotroepen)တွင် အမျိုးသမီးများအား ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ကနဦးလေ့ကျင့်ရေးများတွင် အလွန်ပြင်းထန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ဒတ်ချ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဝန်ထမ်း ၇၀,၀၀၀ ကျော် ခန့်အပ်ထားပြီး ၂၀,၀၀၀ ကျော်မှာ အရပ်သားများ ဖြစ်ပြီး၅၀,၀၀၀ ကျော်မှာ တပ်မတော်သားများ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အစိုးရသည် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ ဖြတ်တောက်သည့်အတွက် စစ်သုံးစရိတ်များကို အကြီးအကျယ်လျော့ချမည့်အကြောင်း ကြေငြာခဲ့ရာ ထို့အထဲတွင် တင့်၊ တိုက်လေယာဉ်၊ သင်္ဘောနှင့် အကြီးတန်းတပ်မတော်အရာရှိများ လျော့ချရေးတို့ပါဝင်သည်။
အမ်စတာဒမ်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မြိုတော်ဖြစ်သည်။ Euronext ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမ်စတာဒမ်စတော့အိတ်ချိန်း(Amsterdam Stock Exchange, AEX)သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး စတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်ပြီး ဥရောပ၏ အကြီးဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းများထဲမှညတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတော့အိတ်ချိန်းသည် မြို့တော်၏ အလယ် ဒမ်ရင်ပြင်(Dam Square)အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ယူရိုငွေကြေးကို တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ယခင်ငွေကြေးဖြစ်သော "ဂီဒါ"နှင့် လဲလှယ်ခြင်းကို အခြားသော ထောက်ခံသူ ၁၅ နိုင်ငံနှင့်အတူ လဲလှယ်ခြင်းကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၉ တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် အသုံးပြုခြင်းကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁ ယူရိုသည် ဒတ်ခ်ျဂီဒါ ၂.၂၀၃၇၁ နှင့် ညီမျှသည်။ ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ယူရိုအစား အသုံးပြုကြပါသည်။
ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သော ရော်တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းတည်ရှိရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာသည် ဂျာမနီနှင့် ယူနိုက်တက်ကမ်းဒမ်းအကြား ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ပေးရာ နေရာပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွား‌ရေး၏ အခြားသော အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။ အမ်စတာဒမ်မြို့သည် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် ၄.၂ မီလီယံကျော် လာရောက်လည်ပတ်သည့် ဥရောပ၏ ၅ နေရာမြောက် ခရီးသွားထူထပ်ဆုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ တိုးပွားလာမှုကြောင့် ဗဟိုနှင့် အရှေ့ဥရောပမှ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။
ကျောက်မီးသွေးနှင့် ဓာတ်ငွေ့မှလွဲ၍ နိုင်ငံ၌ အခြားသော တွင်းထွက်သတ္တုများ မရှိချေ။နောက်ဆုံးသော ကျောက်မီးသွေးတွင်းကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ဂရိုနင်ဂန်ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရာမြေသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံးသော ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းမြေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စလော့ချ်သာရင်းကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များ အလယ်ပိုင်းကတည်းကပင် အဆိုပါ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေ ယူရို ၁၅၉ ဘီလီယံခန့် ရရှိ၍နေသည်။ ထိုဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းကို အစိုးရပိုင် Gasunie ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို အစိုးရပိုင် Royal Dutch Shell နှင့် Exxon Mobil တို့မှ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ "ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းသည် ကမ္ဘာမြေပြင်းထန်စွာ တုန်ခါမှုကို တိုးလာစေပြီး အချို့သော တိုင်းတာချက်များတွင် ၃.၆ ရစ်ချက်တာစကေးလောက်အထိ ပြင်းအားရှိသည်။ ပျက်စီးမှုများအား ပြင်ဆင်စရိတ်၊ အဆောက်အဦတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးနိမ့်ကျသွားသော အိမ်ရာများအတွက်လျော်ကြေးသည် ယူရို ၆.၅ ဘီလီလံ နီးပါးရှိ၍‌နေပြီဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၃၅,၀၀၀ နီးပါးသည် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံစားရသည်ဟု ဆိုသည်။" နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဥရောပသမ္မဂ္ဂ၏ ၂၅ % ခန့်သော သိုလှောင်ထားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှိသည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံဂျီဒီပီ၏ ၁၁% နီးပါးရှိ၍နေသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုမှ အဓိကမျှဝေမှု ရရှိ၍နေသောကြောင့် စွမ်းအင်သတ်မှတ်ချက်တွင် အလွန်မြင့်သည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသည်။
သွားခဲ့သော ခရီးမိုင်အရှည်၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ရထားကို အသုံးပြု၍ သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် ဒတ်ချ်မီးရထားကွန်ယက်သည် ၃,၀၁၃ ကီလိုမီတာရှိပြီး အ​တော်ကို ထူထပ်ပါသည်။ မီးရထားကွန်ယက်ကို ခရီးသည်သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေးအတွက် အဓိကထား အသုံးပြုပြီး အဓိက မြို့ကြီးနှင့် တခြား​သော မြို့များကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော မီးရထားဘူတာရုံ ၄၀၀ ​ကျော်ရှိသည်။ မီးရထားသွားလာမှုနှုန်းမှာသွားလာမှုနည်း​သော မီးရထားလိုင်း[မှတ်စု ၈]တွင် တနာရီတွင် ရထား ၂ စီးခန့်ရှိပြီး ပုံမှန်သွားလာမှုရှိ​သော မီးရထားလိုင်းတွင် တနာရီ မီးရထား ၄ စင်းခန်ရှိကာ သွားလာမှုထူထပ်​သော လိုင်းတွင် တနာရီ ၈ စင်းမျှရှိသည်။ ဒတ်ချ် နိုင်ငံ​တော် မီးရထားကွန်ယက်တွင် ​ကျောင်းသားများအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ထိုအခမဲ့စနစ်တွင် အမ်စတာဒမ်မီသရိုပိုလစ်တန်ဧရိယာမှ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်း​၍ လန်ဒန်နှင့် ပဲရစ်ကို ​ပြေးဆွဲ​သော HSL-Zuid အမြန်မီးရထားလိုင်းပါ ပါဝင်သည်။
စက်ဘီးဖြင့် ခရီးသွားခြင်းသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသည် အပြုအမူဖြစ်ပြီး သွားလာမှုခရီးမိုင်အရှည်မှာ ရထားဖြင့်သွား​သော ခရီးမိုင်အရှည် နီးပါးဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်တို့တွင် စက်ဘီးအ​ရေအတွက် ၁၈ မီလီယံမျှ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နိုင်ငံသားဦး​ရေအရ တစ်ဦးလျှင် စက်ဘီးတစ်စီးထက်မက ပို၍ပိုင်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာ လမ်းမ​ပေါ်တွင် သွားလာကြ​သော ကားအ​ရေအတွက် ၉ မီလီယံခန့်ထက် နှစ်ဆ ပို၍များပြားသည်။  ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဥ​ရောပစက်ဘီးစီးဖက်ဒ​ရေးရှင်း၏အဆိုအရ နယ်သာလန်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့ကို ဥ​ရောပတွင် စက်ဘီးစီးခြင်းကို နှစ်သက်ဆုံးသော နိုင်ငံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့​သော်လည်း ဒတ်ချ်(၃၆%)သည် ဒိန်းမတ်(၂၃%)ထက် သမာရိုးကျ​နေ့ရက်များတွင် စက်ဘီးဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းကို ပြုမှုကြသည်။[မှတ်စု ၉] စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် လိုအပ်​သော အ​ခြေခံ အ​ဆောက်အဦများ ပြည့်စုံပြီး သွားလာမှုများပြား​သော လမ်းများ၌တွင်ပင် စက်ဘီးစီးလမ်းများအတွက် ၃၅,၀၀၀ ကီလိုမီတာ ခန့်အရှည်ရှိသော သီးခြားခွဲထားသော လမ်းများကို ပြုလုပ်ထားသည်။ သွားလာမှုရှုပ်​ထွေး​သော လမ်းဆုံများတွင် စက်ဘီးစီးသူများအတွက် သီးခြားမီးပွိုင့်များကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မြို့​တော်ရှိ စင်တာများ၊ မီးရထား ဘူတာရုံများတွင် စက်ဘီးများ ထားရှိရန် ရပ်နား​နေရာများကို ပြုလုပ်၍ထားသည်။
​​ရော်တာဒမ် ဆိပ်ကမ်းသည် ဥ​ရောပတွင် အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး မျူစ်မြစ်နှင့် ရိုင်းမြစ်တို့၏ ​​ကောင်း​မွန်​သော ​ရေ​ကြောင်းလမ်းများမှ တဆင့် ကုန်းတွင်းပိုင်း မြစ်ညာရှိ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘာဆဲမြို့နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ အတွင်းပိုင်း၊ ပြင်သစ်တို့ကို ​ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အရ ​ရော်တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းသည် ကမ္ဘာ​ပေါ်ရှိ ရှစ်ခု​မြောက် အကြီးဆုံး ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး ၄၄၀.၅ မက်ထရစ်တန်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းကို နှစ်စဉ် သယ်ယူပို့​ဆောင်မှု ပြု​နေရသည်။ ဆိပ်ကမ်း၏ အဓိက လုပ်ငန်း​ဆောင်တာတို့တွင် ​ရေနံဓါတုပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေးနှင့် သင်္ဘောတစင်းမှ တစင်းသို့ ကုန်စည် ​ပြောင်း​ရွေ့​ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဆိပ်ကမ်း၏ လုပ်ငန်း​ဆောင်တာများတွင် ဥ​ရောပပင်မကုန်​မြေမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကုန်စည်ပို့​ဆောင်မှုများအကြား အ​ရေကြီး​သော ကုန်စည်ချိန်း​ပြောင်းရာ​နေရာအဖြစ်လည်း လုပ်​ဆောင်သည်။ ​ရော်တာဒမ်မှ ကုန်စည်များကို သင်္ဘော၊ မြစ်ကူးရေယာဉ်၊ ရထား သို့မဟုတ် ကားလမ်းများဖြင့် ပို့​ဆောင်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ​ရော်တာဒမ်မှ ဂျာမနီသို့ အမြန်ကုန်တင်ရထားလမ်း​ကြောင်းသစ်ဖြစ်​သော Betuweroute ကို တည်​ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒတ်ချ်လူမျိုးများသည် နိုင်ငံသားအလိုက်ဆိုရင် ကမ္ဘာ​ပေါ်တွင် အရပ်အရှည်ဆုံး​သော သူများဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှအရပ်မှာ အရွယ်​ရောက်ပြီးသား ​ယောကျ်ား​လေးတစ်​ယောက်၏ အရပ်မှာ ၁.၈၁ မီတာ (၅ ft ၁၁.၃ in) ရှိပြီး အရွယ်​ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးမှာ ၁.၆၇ မီတာ (၅ ft ၅.၇ in) ရှိသည်။  ​တောင်ပိုင်းတွင်ရှိ​သော နိုင်ငံသားများမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ​မြောက်ပိုင်းတွင်​နေထိုင်သူများထက် အရပ် ၂ cm (၀.၈ လက်မ) ခန့် ပို၍ ပုသည်။
နယ်သာလန် ပရိုတက်စတင့် ဘုရားကျောင်း[မှတ်စု ၁၀] (15.5%)
အခြားသော ခရစ်ယာန်ဘာသာများ[မှတ်စု ၁၁] (4.6%)
ဒတ်ချ်သည် ကမ္ဘာ​ပေါ်ရှိ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုအနည်းဆုံးသော လူမျိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစု​နှောင်းပိုင်းကာလမတိုင်မီအထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အဓိကကိုးကွယ်​သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြား​သော ဘာ​သာ​ရေးကိုးကွယ်မှုများ ရှိ​နေ​​သော်လည်း ဘာသာ​ရေးအ​ပေါ် စွဲမြဲလိုက်နာမှုသည် ယုတ်​လျော့၍လာခဲ့ပါသည်။
VMBO တွင် အတန်း ၄ ခု ပါဝင်ပြီး အခြားသော အဆင့်ခွဲများစွာရှိသည်။ VMBO အတန်းများအား အောင်မြင်ပြီးသည်နှင့် MBO အတန်းများအား ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်သည်။ MBO (middle-level applied education) သည် လက်တွေ့အသုံးချ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကို အဓိကထား သင်ကြားသော ပုံစံဖြစ်သည်။ MBO အောင်မြင်သည့် လတ်မှတ်ရှိသော ကျောင်းသားသည်သာ HBO ကို ‌‌တက်ရောက်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ HAVO သည် အတန်း ၅ ခုရှိပြီး အောင်မြင်ပါက HBO ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ HBO(higher professional education) သည် တက္ကသိုလ် ပညာရေး(အသုံးချ သိပ္ပံ)ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ပါက သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အဘိုက် ဘွဲ့ဒီဂရီကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်ဘွဲ့နှင့် တူညီသည်။ VWO (comprising athenaeum and gymnasium) တွင် အတန်း ၆ ခုပါဝင်ပြီး သုတေသနတက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အကြိုပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်တွင် သုံးနှစ်ကြာမြင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီကို သင်ကြားနိုင်ပြီး ၎င်းနောက် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ် ကြာသော ဘွဲ့လွန်ကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သည်။ ထိုသို့သင်ကြားပြီးပါက လေးနှစ် သို့မဟုတ် ငါးနှစ်ကြာမြင့်သော ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် Euro health consumer index (EHCI)၏ နံပါတ် ၁ နေရာကို ဆက်လက်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းညွှန်းကိန်းသည် ဥရောပရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးအမှတ် ၁,၀၀၀ တွင် ၉၁၆ မှတ်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စစ်တမ်းတို့တွင် ထိပ်ဆုံးသုံးနိုင်ငံအနက် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှု ၄၈ မျိုးတွင် ပါဝင်သည့် လူနာအခွင့်အရေး၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အကျိုးရလာဒ်တို့တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဥရောပ ၃၇ နိုင်ငံတွင် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ၆ နှစ်ဆက်တိုက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံထားရသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ နယူးဇီလန်တို့နှင့် ကျန်း‌မာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ရပ်တွင် ပထမနေရာတွင် ရှိနေခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးမားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီးကတည်းကပင် ဒတ်ချ်တို့၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည် နှစ်စဉ် ညွှန်းကိန်းများ၌ ပိုမိုများပြားသော အမှတ်များကို ရရှိခဲ့သည်။ HCP (Health Consumer Powerhouse) ၏ အဆိုအရ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် 'ပရမ်းပတာဖြစ်သော စနစ်' ရှိပြီး ဆိုလိုသည်မှာ လူနာ၌ သူ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံအား လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်မှု ကြီးမားစွာ ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံတို့နှင့် ကွာခြားချက်မှာ ထိုပရမ်းပတာဖြစ်မှု(လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်)ကို အစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဆုဲးဖြတ်ချက်များသည် လူနာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအကြား ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုအတွင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အမျိုးစုံသော ဂီတရိုးရာများ ရှိပါသည်။ ဒတ်ချ်ရိုးရာ ဂီတအမျိူအစားကို "Levenslied" ဟု ခေါ်ပြီး ဘဝရဲ့သီချင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဤသီချင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုးရှင်းသော တေးသွားနှင့် ရမ်သမ်ရှိပြီး ရိုးရှင်းသော နှစ်ကြောင်းဆက်ကာရန်နှင့် ကောရပ် ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ပေါ့ပါးသော တေးသွားသံစဉ်ပုံစံရှိပြီး လွမ်းဆွက်တမ်းသသော တေးသွားပုံစံဖြစ်လည်း ရေးဖွဲ့လေ့ရှိကာ အချစ်အကြောင်း၊ သေခြင်းတရားနှင့် အထီးကျန်ဆန်မှုတို့အကြောင်းပါဝင်သည်။ အကော်ဒီယံနှင့် လေမှုတ်အော်ဂန်ကဲ့သို့သော ရိုးရာတူရိယာများသည် levenslied ဂီတအတွက် အဓိကကျသော တူရိယာများဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းခေတ်များတွင် ဂီတပညာရှင်များသည် synthesiser များနှင့် ဂစ်တာများကို အသုံးပြု၍လာခဲ့သည်။ ယန် စမစ်(Jan Smit)၊ ဖရန့် ဘောင်အာ(Frans Bauer) နှင့် အန်ဒရဲ ဟာ့ဇ်(André Hazes) တို့သည် ဤဂီတအမျိုးအစားကို သီဆိုသူအနုပညာရှင်များထဲတွင် ပါဝင်ကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ရုပ်မြင်သံကြားဈေးကွက်သည် စီးပွားရေးနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ရုပ်သံလွင့်ဌာနများဖြင့် ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ပရုပ်သံလိုင်းများမှ အစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် အင်တာဗျူးများကို မူလအသံအား စာတန်းထိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည်။ ကလေးများအတွက် အစီအစဉ်များကိုသာ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့်အသံများမှ မိမိဘာသာစကားသို့ ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သည်။
အားကစားအဖွဲ့အစည်းများကို ၁၉ ရာစုအကုန် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာကစားဖက်ဒရေးရှင်းများတည်ထောင်ခြင်း၊ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အားကစားကလပ်များ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ဒတ်ချ် အမျိုးသား အိုလံပစ် ကော်မတီအား ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်မတိုင်မှီအထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ​နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုတံဆိပ် ၂၆၆ ခု၊ ​ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုတံဆိပ် ၁၁၀ ခု ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် ဒတ်ချ် နိုင်ငံ့အသင်းနှင့် အားကစားသမားများသည် များစွာ​သော အားကစားနယ်ပယ်များတွင် ​အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတွင် ဒတ်ချ်အမျိုးသမီး ​မြတ်ခင်းပြင်​ဟော်ကီအသင်းသည် ​အ​အောင်မြင်ဆုံး​သော အသင်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန် ​ဘေ့စ်​ဘောအသင်းသည် ဥ​ရောပ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ ၃၂ ပွဲတွင် အကြိမ် ၂၀ မျှ ဗိုလ်စွဲခဲ့​သော အသင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ် K-1 kickboxers သည်လည်း K-1 World Grand Prix ပွဲ ၁၉ခုတွင် ၁၅ ကြိမ်မျှ ဖလားရရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိဖော်မြူလာ ဝမ်းတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်​နေ​သော Max Verstappen သည် Grand Prix ရရှိခဲ့​သော ပထမဆုံး​သော ဒတ်ချ်လူမျိုးဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှ၁၉၈၅ ခုနှစ်ထိ Dutch Grand Prix ကို ကျင်းပခဲ့​သော Zandvoort ကမ်း​ခြေမြို့တွင် ပြိုင်ပွဲများအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ကျင်းပမည် ​ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒတ်ချ်အမျိုးသား ​ဘောလုံးအသင်းသည် ​အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့​သော အသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၂ ​နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ​ငွေတံဆိပ်၊ မကြာ​သေးမီနှစ်များက အတ္တလန္တာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့​သော ၁၉၉၆​ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ​ရွှေတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။ ​အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမား ရရှိခဲ့သည်မှာ အမျိုးသမီး ​ဘောလီ​ဘောအသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဥ​ရောပချန်ပီယံရှစ်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် World Grand Prix ရရှိခဲ့သည်။
၁၆ ရာစုနှစ်တွင် တည်​ထောင်ခဲ့​သော ​လေဒင့်တက္ကသိုလ်ကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာနများ ​ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ​[မှတ်စု ၁၂] လေဒင့်တက္ကသိုလ်မှ Christiaan Snouck Hurgronje ကဲ့သို့ ပညာရှင်များ ​မွေးထုတ်​ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားနှင့် ယဉ်​ကျေးမှုကို အထူးပြု​လေ့လာကြသူများ ယခုထက်တိုင်​အောင် ရှိ​သေးသည်။ ​လေဒင့်တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အ​ရှေ့​တောင်အာရှနှင့် ကာရစ်ဘီယံ​လေ့လာ​ရေး နယ်သာလန်​ တော်ဝင်အင်စတီကျူ(KITLV)များသည် ယ​နေ့အချိန်ထိတိုင်​အောင် အင်ဒိုနီးရှား​လေ့လာ​ရေးတွင် ဉာဏနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ နေရာများအဖြစ် ရှိ၍နေသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အခြားလေ့လာနိုင်သေးသော နေရာများမှာ အမ်စတာဒမ်ရှိ မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ Tropenmuseum ပြတိုက်ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးခွဲ‌ဗေဒ၊ မနုဿဗေဒနှင့်ဆိုင်သော များပြားလှစွာသော စုဆောင်းမှုများ ရှိ၍နေသည်။
အင်ဒိုနီးရှားဟင်းလျာနှင့် စား​သောက်ကုန်များကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုလိုနီ​ခေတ်လက်ရာလွှမ်း​နေ​သော Rijsttafel၊ Nasi goreng နှင့် ဆာတေး ကဲ့သို့​သော ဟင်းလျာများသည် နိုင်ငံတွင်း လူကြိုက်များ​သော ဟင်းလျာများ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့်မြို့တွင်မဆို မြို့အရွယ်အစား မည်မျှရှိသည်ဖြစ်​စေ ""တိုကို(toko)ဟု​ခေါ်​သော ဒတ်ချ်-အင်ဒိုနီးရှားဆိုင် သို့မဟုတ် တရုတ်-အင်ဒိုနီးရှားဆိုင် ရှိ၍​နေသည်။ ထို့ပြင် 'ပါဆာ မာလန်(Pasar Malam)ဟု​ခေါ်​သော ည​ဈေးပွဲ​တော်များကို တနှစ်ပတ်လုံး ဖွင့်လှစ်ကြသည်
↑ Zaken၊ Ministerie van Algemene (19 May 2015)။ Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? – Rijksoverheid.nl။[လင့်ခ်သေ]
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ CBS Statline။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ Netherlands။ International Monetary Fund (April 2019)။
↑ Human Development Report 2019 (PDF) (in en)။ United Nations Development Programme (10 December 2019)။ 30 April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ Ministerie van Algemene Zaken (19 May 2015)။ Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden?။
↑ Kreijger၊ Gilbert။ "Dutch allow Wilders' anti-Pole website, EU critical"၊ Reuters၊ 10 February 2012။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ The Dutch curse: how billions from natural gas went up in smoke Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine. LEES MEER, 17 June 2009
↑ Energy Policies of IEA Countries။ International Energy Agency။
↑ Energy Policies။ IEA။
↑ ၃၇.၀ ၃၇.၁ The hunt for gas and oil reserves that are more difficult to extract။ EBN။7September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Netherlands Energy System Overview။ IEA။
↑ Energy Agreement for Sustainable Growth။ International Energy Agency။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ National Energy Outlook 2017။ Energy Research Center of the Netherlands။
↑ ၄၈.၀ ၄၈.၁ Netherlands: Agricultural situation။ USDA Foreign Agriculture Service။ 19 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၀.၀ ၅၀.၁ ၅၀.၂ ၅၀.၃ Waard၊ Jan van der; Jorritsma၊ Peter; Immers၊ Ben (October 2012)။ New Drivers in Mobility: What Moves the Dutch in 2012 and Beyond? (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ Delft, the Netherlands: Organisation for Economic Co-operation and Development International Transport Forum။ 17 January 2013 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ ၆၇.၀ ၆၇.၁ ၆၇.၂ ၆၇.၃ ၆၇.၄ The World Factbook – Netherlands။ Central Intelligence Agency။ ၁၈ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Feiten en cijfers over immigratie – Pagina 5။ Ons Amsterdam။
↑ ၈၃.၀ ၈၃.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cbs2016
↑ ၈၅.၀ ၈၅.၁ "Hoe God (bijna) verdween uit Nederland"၊ NOS၊ 13 March 2016။ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၆.၀ ၈၆.၁ Bernts၊ Tom; Berghuijs၊ Joantine (2016)။ God in Nederland 1966-2015။ Ten Have။ ISBN 9789025905248။
↑ ၁၀၃.၀ ၁၀၃.၁ ၁၀၃.၂ Zorgrekeningen; uitgaven (in lopende en constante prijzen) en financiering (in Dutch)။ Centraal Bureau voor de Statistiek: StatLine (20 May 2010)။ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁၀.၀ ၁၁၀.၁ Sustainable enterprise | RVO.nl။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နယ်သာလန်နိုင်ငံ&oldid=656083" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ မေ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။